Imibuzo > Isifo Sikashukela Sokunqoba!
I-Teraflex yesifo sikashukela: kungenzeka ukuthatha ama-chondroprotectors wohlobo 2 sikashukela
Ngabe ama-chondroprotectors akhuphula ushukela wegazi? I-Glucosamine isebenza kahle uma ihlanganiswe ne-chondroitin, ngakho-ke kuhle ukuthi bobabili bangamuthi wakho. ...
Bangaki abaphila nesifo sikashukela ku-insulin
Ngabe abantu beshukela bahlala isikhathi esingakanani kwi-insulin Diabetes mellitus yisifo esingamahlalakhona, okuthi eminyakeni yamuva sihlanganise inani elandayo labantu emhlabeni. ...
Ushukela wegazi ongaphezulu kwe-10
Okufanele ukwenze emazingeni kashukela angu-15 nangaphezulu kwe-Glycemic kukhulu kuthinta kabi inhlala-kahle yenhliziyo yesiguli, kubangele izinkinga futhi kungadala ukukhohlakala. Ezimweni ezinzima, lokhu kuholela ekufeni noma ukukhubazeka kweziguli. ...
Yini okudingeka yenziwe uma ushukela wegazi ungama-23-23
Ushukela wegazi kusuka kumayunithi angama-23.1 kuya kwangama-23,9: kanjani ukwehlisa? Amayunithi eShukela 23 yisimo se-pathological esibonakaliswa ukunqwabelana kwe-glucose egazini. ...
Isishayo sesikhathi sethu: ukutholakala kokukhuluphala ezinganeni nasentsheni
Uhlu oluphelele lwezimbangela zokukhuluphala ezinganeni nasentsheni Ukukhuluphala ngokweqile ezinganeni nasentsheni yisifo se-metabolic.Ukwanda kwesisindo somzimba kuholela kumfutho wegazi ophakeme, ukuthambekela kokuthayipha isifo sikashukela 2, ukuqunjelwa, ukuzuma kwe-bile, ukuvuvukala kwamalunga. ...
Ngingakwazi ukusebenzisa ipeni yesirinji kanye ne-cartridge enezinhlobo ezihlukile ze-insulin?
Kungenzeka yini ukuthi upompe i-insulin kusuka ku-vial uye kuma-cartridge aguqukayo? “Ngineminyaka engu-42 ubudala. Mina ngokwami ​​ngibe nesifo sikashukela sohlobo 1 iminyaka engaphezu kwengu-20, ngithenga i-insulin kuma-cartridgeges. ...
Ushukela uphakanyisiwe ngesikhathi sokukhulelwa - kubaluleke kangakanani lokhu?
Yini engingayidla ukuze ushukela ungakhuphuki ngesikhathi sokukhulelwa? Sawubona, ngakhipha igazi, kwavela ukuthi ushukela wegazi wawungama-5.4 (amasonto ayi-9 okukhulelwa). Yini ongayidla futhi uyiphuze ukuze ivamile? ...
Ukwanda kwe-glucose wegazi: kusho ukuthini, izimbangela, izimpawu nezimpawu zokwelashwa
Ukwanda kweglucose yegazi - kusho ukuthini? Umsebenzi nenhlala-kahle yomuntu ngqo kuncike kuzinga le-glycemia - inkomba eveza ubukhona beshukela egazini. ...
Yini i-mellitus yesifo sikashukela esinxephezelwe kaningi ikhula ngefomu elizimele le-insulin. Kulokhu, lesi sifo sakha ngokuhamba kancane ngokuqhubeka kancane kancane. ...
Isifo sikashukela asiyiswa ebuthweni
Ngabe bangene ebuthweni elinesifo sikashukela? Ukuhlola ukufaneleka kwezinsizwa zensizakalo yokuVikela Izwe nganoma yisiphi isikhathi kwakuyindaba ehlonishwayo neyamukelekayo. Izinsizwa ezazizama ukugwema isiphetho se-draftee zazingathathwa njengamadoda angempela. ...
Ukubuyekezwa mayelana ne-Dialek - umuthi wesifo sikashukela (uwuthatha kanjani umuthi)
I-Dialek: ukubuyekezwa kokwelashwa kwesifo sikashukela Mina, u-Irina Nikolaevna Gileva, ngihlala edolobhaneni laseZenkovo, esifundeni saseKemerovo. Ngineminyaka engama-25. Umama wami, uneminyaka engama-46, kwatholakala ukuthi unesifo sikashukela sohlobo 2. Amaphilisi anqunyelwe. ...
Ukukhathala, ubuthakathaka, ukujuluka - izimpawu zesifo?
Izimo ezi-5, ezikhonjiswa ukujuluka ngokweqile Ukuswakama kwenza umsebenzi obaluleke kakhulu wokuvikela umzimba ekushiseni ngokweqile. ...
Ukusebenza ngokomzimba kohlobo 2 sikashukela mellitus: izinkomba, ukuphikisana
Ukuzivocavoca ngesifo sikashukela Kwenzekani emzimbeni lapho sihamba? Noma yikuphi ukunyakaza kungenxa yomsebenzi wezicubu. Ngesikhathi sokusebenza kwemisipha, i-glucose isebenza njengomthombo wamandla. ...
Ngingabuphuza utshwala beshukela?
Ngingakwazi yini ukuphuza utshwala nesifo sikashukela? I-Alcohol iyingozi kushukela ngoba ixhumana ne-insulin futhi ibeka umthwalo osindayo esibindini nakuma-pancreas, okubangela ukuphazamiseka emsebenzini wawo. Ngaphezu kwalokho, kusebenza futhi njengomthombo woshukela. ...
Unganciphisa kanjani isisindo ngohlobo 2 sikashukela - ukudla nezindlela zokunciphisa isisindo
Unganciphisa kanjani ishukela? Incazelo yokudla, ukusebenza komzimba nezincomo zochwepheshe. ...
Kungani ungakwazi ukufaka i-insulin kumuntu ophilile, uyini ubungozi? Kwenzekani uma ufaka i-insulin kumuntu ophilile?
Kungani ungakwazi ukufaka i-insulin kumuntu ophilile, uyini ubungozi? Kungani i-insulin iyingozi Ukuhlukumezeka kwezidakamizwa ezilwa nesifo sikashukela kuncane kakhulu okwaziwayo, kepha into efanayo isekhona.Ngaphezu kwalokho, kuyingozi kakhulu. ...
Ushukela Wegazi 20: Imiphumela Yezinga 20
Ushukela wegazi ukhuphuke amayunithi angaphezu kwama-20 - Kusho ukuthini? Ukuba khona kwesifo esifana nesifo sikashukela kusho ukuqapha okuphoqelekile kwe-glycemia ukuze kuvikelwe imiphumela yezempilo. ...
Ngabe ubumnandi bungakhuphuka ngomfutho?
Ungawenza kanjani ngokwejwayelekile ushukela ophakanyisiwe ngemuva kokuhlinzwa kwengcindezi? Sawubona Kwadingeka ukuthi ngihlinzwe ukuze kususwe i-myoma ngonyaka ka-2011. Ngemuva konyaka, ukukhuphuka kwenhliziyo nokucindezela kwaqala. Ngilandele lokhu futhi angizange ngibanikeze ukukhuphuka okuningi. ...
Yini okufanele uyenze uma ushukela wegazi wehla kakhulu?
Imibuzo efanayo futhi enconyiwe. Kulesi simo, ngeke kube nempendulo elula kumbuzo wakho, ngeshwa. Into yokuqala okufanele uyenze ukuyisa esibhedlela esibhedlela se-endocrinological kusuka ku-endocrinologist yakho. ...